Amarada Tracking - Yan Hou Tang Blog
Cunto fudud Blog Cuntada
Dajisaa Shaaha Blog
dalacaad Arbacada ah
dalacaad rasmiga ah
Yan Hou Tang – adeegga Tracker >>>
dheregtaan Just in raad tirada duurka, guji "TRACK" button.
Taageer ka badan 300 askartii ordi jirtay su'aal iyo auto ogaado.
Taageer ka badan 70 luqadood, smartphone iyo isticmaalka kiniinka.
askartii ordi jirtay Full Shiinaha halkan ka fiiri.
page ayaa la ajiibay ka badan 3 mins, fadlan reflash isticmaalka.
Waqtiga dirida: (kaliya tixraaca)
adeegga Standard: 7-15maalmood ; dedejiso Service 2-7 maalmood
Saacado ah Tracking tirada sii daayo ee website:
adeegga Standard: 1~ 7 maalmood ; Dedejiso Service 1 ~ 2 maalmood
Tirada raad waa baadil:
waxaa laga yaabaa in aan Upload nidaamka warqaadayaal, gudbiyaan tiro kale ama nidaam isku dhafan.
Fadlan hubi dhowr maalmood ama xiriir ka dib adeegga macaamiisha.
Marka xaaladda sii "ah ee" waqti dheer iyo item marnaba:
shayga laga yaabaa ayaa la dhiibay in post-xafiiska deegaankaaga, ama ay jirto tigidh ogeysiis in aad sanduuqa boosta ah ; Waxaa laga yaabaa in ay sidoo kale qaban caadooyinka, fadlan soo waca si aad u hubiso.
Adeegga More >>>
blog & Taageerada
Categories Select Category Store blog Coffee Blog Fruit Blog Cunto fudud Blog Cuntada shaaha Blog Shaaha Black ubaxa Shaaha Shaaha Fruit Shaah cagaaran Shaaha Oolong Shaaha White Dajisaa Shaaha Blog Gudbinta dalacaad Amazon dalacaad Arbacada ah dalacaad rasmiga ah Taageerada Benefit yaynana kolna Arrin shaaha Cup
Iska yaree fursada sambabaha oo uu khalkhal geliyo fayras
Waxtarka iyo Waxqabadka Taiwan Shaaha Lishan Caanka ah
Waa maxay Shaaha Shanlinxi ee aragtidaada?
MA OGTAHAY sababta shaaha cagaaran ee jasmine uu caan u yahay?
Toban shaah oo caan ah oo Taiwan leh dhadhan muuqaal oo cajiib ah
Maxaad ugu talinaysaa Shaaha Cad ee Shiinaha dumarka?
shaaha cad shaah ubaxa koob shaah shaah cagaaran Jianzhan shaah dadka da'da ah shaaha diyaarid shaah madow Taiwan shaaha shaah Shiinaha shaah puerh hadiyad Arbacada ah faa'iidooyinka shaaha cabbin shaah Cabitaanka shaaha yanhoutang avgiftning shaah oolong dallacsiinta
copyright © 2021 | Theme WordPress by Dulucda MH